GlobalNet | Products & Services
GlobalNet ဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှ တဆင့် International သို့ တိုက်ရိုက် ချိတ်ဆက်ခွင့် လိုင်စင်ဖြစ်တဲ့ IGW license ရရှိထားတဲ့ Telecom Operator တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်မြို့ အပါအဝင် မြို့ကြီးများမှာ ကိုယ်ပိုင် Fiber Network Infrastructures တည်ဆောက်လျက် ယနေ့ခေတ် Telecommunications ကဏ္ဍတွင် ထိပ်တန်းမှ ဦးဆောင်သည့် Provider တစ်ဦး အနေဖြင့်customer network အခိုင်အမာ ရရှိထားတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဘဲ ဖြစ်ပါတယ်…. GlobalNet မှ ရရှိနိုင်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှုများကတော့…
Internet Connectivity အား အဓိကအားထား၍ လည်ပတ်နေသော လုပ်ငန်းများအတွက် SLA ပါဝင်ပြီး တည်ငြိမ်မြန်ဆန်တဲ့ DIA-Premium Quality Internet
ရုံးခွဲ တစ်ခုနှင့် အထက် ဖွဲ့အစည်းကြီးများအတွက်……လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ ကိုယ်ပိုင် Network တစ်ခု တည်ဆောက်ပြီး Data များ၊ Video များ၊ Voice များ ကို Internet မလိုဘဲ အချိန်နှင့်တပြေးညီ လျင်မြန်စွာ ပေးပို့နိုင်တဲ့…MPLS- Secure Connectivity Solution with Multi Protocol Label Switching Services
ရန်ကုန်မြို့အပါအဝင် မြို့ကြီးများမှာ ကိုယ်ပိုင် Fiber Network 250000KM ကျော် တည်ဆောက်ထားပြီး Mobile Network Operators များ၊ Internet Service Provider များနှင့် Enterprise များ ရဲ့ အားထားရတဲ့ Backbone Network Provider တစ်ဦးအဖြစ် ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိတဲ့…Fiber Leasing Services – Dark Fiber
တိုက်ရိုက် IGW မှ တဆင့် Thailand, Singapore, China အစရှိတဲ့ International Carriers များနှင့် ချိတ်ဆက်လျက်..ယနေ့ အောင်မြင်လျက်ရှိသော Internet Service Providers များ၏ နောက်ကွယ်မှ ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိသော GlobalNet IP Transit Service
မြန်မာမှ International သို့ သီးသန့် တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ပေးနိုင်တဲ့ International Connectivity Solution တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ GlobalNet IPLC Services
Global Transport Technology မြန်မာမှ International သို့ မည်သည့်နေရာမဆို သီးသန့် တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ပေးနိုင်တဲ့ Next Generation Global Transport Technology တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ GlobalNet IEPL Services
တစ်နေရာနှင့် တစ်နေရာ၊ မြို့တစ်မြို့နှင့် တစ်မြို့၊ ရုံး တစ်ရုံးနှင့် တစ်ရုံးကြား တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ပေးနိုင်တဲ့ Carrier Grade Connectivity တစ်ခုဖြစ်ပြီး Data များ၊ Video များ၊ Voice များကို လိုအပ်သလို ပေးပို့ရယူနိုင်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှု တစ်ခုဘဲ ဖြစ်ပါတယ်…ISPs များ၊ Operators များနှင့် Enterprises များရဲ့ Data Transmission လိုအပ်ချက်များအတွက် – Carrier Grade DPLC Services
အသေးစား အလတ်စား စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းများမှ အစပြု၍ မြန်မာ့ထိပ်တန်း ကုမ္ပဏီကြီးများ အပါအဝင် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများ Mobile Operator ကြီးများအထိ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ End to End Telecommunications ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် GlobalNet အား ယုံကြည်စိတ်ချစွာ အပ်နှံလိုက်ပါ…
Call Now: +959788 500 072
Cloud Computing For Higher...
? GlobalNet မှ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ...
Customer CB Bank Products ...